Indlela yokukhwela i-Dirtbike: Okokuqala, Phatha i-Motorcycle yakho ukuze i-Dirt
Uxinzelelo oluncinci lwesithintelo lunceda i-rabi yebhayisikili yakho ihambelane neendawo ezingekho phantsi. Ifoto © Getty Images
Ukuba sele ukwazi ukukhwela isithuthuthu kodwa ufuna ukukhwela kwinqanaba lomatshini okanye umatshini owenzela ezimbini, zikho iingcebiso ezilishumi zokugcina engqondweni xa usuka kwi-pavement ukuhamba.
Kanye njengoko uhamba ngebhayisikili yendlela, uya kufuna ukusebenzisa i -T-CLOCS yoHlolo lwezokuThuthukiswa kweSithuthuthu eqinisekisa ukuba isithuthuthu sakho silungele ukuthatha isenzo.
Kodwa ukubetha ukungcola kunokuquka ukuyeka ukuxinzelelwa kwevili (ngamanye amaxesha ukuya kuma-20 lbs okanye njalo), ukwenzela ukuba uncede i-rubber ibe yinto eguquguqukayo neendawo. Kwakhona ingcamango efanelekileyo yokutshiza izikhwama zesikhumba okanye izesekeli ezingakunciphisa okanye zidibanise ngokukhululeka ngenxa yeentshukumo. Ekugqibeleni, kufuneka uqwalasele ukukhwela okanye ukukhipha izibonakaliso zokujika, imimoya yemimoya, kunye nezibuko, njengoko ziza kuphazamiseka lula ukuba kwaye nawuthabatha nini.
Umbono ongaphelelanga (ongaphelelanga) we-motorroad motorcycle gear ... ezo zibopheko ezingenakunokuthi zonakalise umonakalo omkhulu kumgca! Ifoto © Plush Studios
Ukungcola kunokuba buthambile, kodwa izingozi ze-offroad zisenokubangela ukulimala kakhulu; emva koko, umzimba womntu uyinto ephosakeleyo. Njengoko ukukhwela kwendlela, ukhetha ukuphepha okufanelekileyo kwinqwelo - ukusuka kwi- helmet ukuya kwiibhuthi-yinxalenye ebalulekileyo yokuzikhusela.
Impahla yokuxhatshaza ihluke kakhulu kumgama wendlela, njengoko iibhuthi zide kwaye zinokuqiniswa ngakumbi kwiindawo ezinjengeempawu. Ukukhusela okukhuselekileyo ngamadolo, amahlombe, isifuba (aka, i-roost deflector), kunye nezikhwebu (ezingaboniswa apha) zivame ukugqutywa ngamagosa kunye neepantshi ezikhanyayo. Iiglavu zihlala zikhanya kwaye ziguquguquke, ukwenzela ukuba zihlangabezane nobuninzi beentambo ezinxulumene nokukhwela kwinqanaba, kunye neenqatha okanye iinqwelo ze-motocross zibandakanya i-sunshade kunye nommandla ovulekileyo weebhola. Ndikholelwe, ukukhwela omnye ngomzila othuliyo kuya kukunceda uqonde ama-goggles agcina ukungcola ngaphandle kwamehlo akho.
Zihlolisise phambi kokuba ugibele: ngaba izitho zomzimba zakho zikhululekile ngokwaneleyo ukuba ziqhutywe ngeempompo? Ifoto © Andrea Wilson
Kubalulekile ukuba ugweme ukuqina xa ukhwele kwindlela, kodwa ubugcisa bokukhupha buba ngumbono ohluke ngokupheleleyo xa ungaphandle. Ngenxa yokuguqulwa okungaqinisekiyo kwimihlaba yomhlaba, ukunyuka kokunyuswa nokunyuka kwexinzelelo, umzimba wakho uya kuhlangabezana nokudibanisa, ukuhamba, nokuguqula ... okanye ukubeka nje, kuya kwenza kube lula ukuba uya kuhla.
Qinisekisa ukuba uzihlolisise ngaphambi kokuba uhambe ungcolile; gxotha umzimba wakho kwaye wenze isiqinisekiso sokuthi unemimber ngangokunokwenzeka kwaye ulungele ukugqitywa ngeempompo. Ngaphandle koko, kulula kakhulu ukulahlekelwa ukuhamba nokubambisana okubalulekileyo ngebhayisikili yakho.
Ukuma = Ukunciphisa iZiko Lakho loMoya
Ukuma ngokufanelekileyo kwebhayisiki. Ifoto © BMW
Isikhululo sebhayisikili sihlala sijikeleze iinjinjini zayo, kwaye xa umgibeli ehleli kwisikhwama esi siko sikhuliswa.
Wonke umntu uyazi ukuba isikhulu esiphezulu sogunyaziso senza i-bike phezulu ibe nzima kwaye ilukhuni ukuqhuba. Kwaye nangona kukuvakala okungafaniyo, ukuma emagqabeni okunene kunqabana nendawo yokukhukula ngamandla, ekubeni yonke isisindo sakho ngoku uphumla kwizikhonkwane. Akumangalisi ukuba malunga neekota ezintathu zokunqumla ukubandakanya ukuma kwezikhonkwane; Ukuhambisa ibhayisikili ejikeleze izithuba eziqinileyo kuya kuba lula xa uhlala kwisihlalo.
Iingcebiso ezimbalwa zokuma kwibhayisiki:
Yima kwiibhola zeenyawo zakho, kungekhona izithende; i-shifter kunye ne-brake pedal yinto engenakufikelela ngaloo ndlela, kodwa kulula kakhulu ukuvakalelwa kwi-physics ye-bike.
Ukumbamba ngokukhawuleza itanki ngamathanga akho; kuya kukunika ingqondo engcono kwinqanaba elibukhali, kwaye kukunceda ugcine ibhayisikili ekulawuleni.
Sebenzisa amadolo njengama-absorption; oya kuqinisekisa ukuba awuyi kuphoswa kwibhayisikili.
Hamba ngeendwangu zakho; eziza kubonelela ukuguquguquka xa indlela ihamba.
Ungesabi Akukho Mithintelo
Asiyiki amanzi apha! Ifoto © Kevin Wing
Abakhweli bezitalato banomdla wokukhusela izithintelo, kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo: iibhayisikili ezininzi zineendlela zokumisa ukunqumla ukukhawuleza. Ngakolunye uhlangothi, i-dirtbikes ixhotyiswe ukunyuka phezu kweengodo, ngodaka, nakuzo zonke iintlobo, iindawo zokugqithisa, kunye neziqhamo.
Kuthatha ixesha elide ukugqithisa ingcamango yokuba UNOKUBA ungadlulela loo mqobo, kodwa xa wenza njalo, uvakalelo lukhulula. Qiniseka ukuba uwela le nto kumendo wakho kwi-angle ye-degree-degree; Ngaloo ndlela, ivili lakho aliyi kubanjwa. Kwakhona, i-dirtbikes iyakwazi ukuphakamisa isondo labo elingaphambili kunokuba lilula ngakumbi kunezitrato, ezenziwa ngokulula ngokugqithisa kwi-throttle kwaye zikhwela kwiiphatha. Kwaye kwinqaku, khumbula ukuba usebenzise umxhamla kumxhamla wakho-unqabile, kwaye unokufumana lula kwaye ulahlekelwe ithuba lakho.
Cinga emva: I-Braking
Indlela yokuqhekeza kwi-dirtbike. Ifoto © Getty Images
Enye into oya kuyenza ukuba ufunde kwakhona kwindawo yokungcola yinto yokuqhuma isithuthuthu . Ukumisa kwindawo ebomvu kubandakanya ukusetyenziswa kwe-brake ngaphambili; malunga neepesenti ezingama-70 zomgudu we-lever uqala ukuya phambili ngenxa yokudluliselwa kwesisindo apho xa ibhayisikili iqala ukunyuka.
Nangona kunjalo, ukungcola kubonisa i-paradigm ehlukileyo ngokubanzi: kuba kulula ukuba "uhlambe" okanye "tuck" phambi kwevili ngenxa yokutshatyalalisa ukutshatyalalisa, kufuneka ucinge emva kwaye wenze isicelo sakho semigudu yokubheja phambili. Ukukhwela kwangasemva, njengoko kuboniswe ngasentla, yindlela epheleleyo yokususa isivinini xa usuka ngaphandle.
Ziqhelise iislayidi eziphindaphindiweyo ukuze ufumane ingqiqo yento evelelwa ngayo, ngoko ungabanjwa ngokungazi kakuhle xa ufumana imeko efuna ukukhwabanisa i-panic ... kwaye uhlale kuloo mida ngaphandle kokuba uyazi ukuba ayiyi kuhlamba.
Cinga emva: Ukujika
Ngokungaqhelekanga njengoko kubonakala, le ndlela yokumisa yenza i-balance balance yokujika ibhayisikili. Ifoto © Yamaha
Abagibeli beendlela baqeqeshwe ukuba baxhomeke ekuphenduleni, kwaye abalandeli bezobuhlanga bayazi ukuba ukuxhoma kwibhayisikili ngaphakathi ngaphakathi kunciphisa isikhulu se-motorcycle. Kodwa izinto zenziwa ngendlela eyahlukileyo kwindawo yokungcola.
Ukuqala, ukuphikisana kunokukufumana kwisiqwenga seenkathazo kuba kuvumela indawo engakumbi yokukhathala, kwaye ekugqibeleni unokupheliswa. Esikhundleni sokuba uncike ekuphenduleni, phumla ubunzima bakho ngaphandle kwesikhonkwane, njengoko kuboniswe apha, kwaye uguqule umzimba wakho kude ngaphakathi kwithuba ukuze ubeke amandla amaninzi kumathala. Kuthatha ezinye ukuzisebenzisela, kodwa xa unokubona ukuba ukhuselekile kangakanani xa ibhayisikili ivakalelwa ngale ndlela yokuguquka, iya kuvela ngokwemvelo.
I-Bonus Turning Tip: Phonsa Umlenze
Xa ufuna ukusebenzisa umlenze wakho kwi-dirtbike. Ifoto © I-Red Bull
Emva kokuba ubophe ikhanda lakho ekujikelezeni ukungcola, elinye iqela kwinkqubo liza kudibanisa umgca wokukhuseleko: ukuphosa umlenze ngaphandle.
Okokuqala, masikucacise ukuba oku akusiyo icebo elicebisayo leebhayisikili ezinzima-ngokwenene, amaninzi amaninzi kunye neenjongo zomculo izithuthuthu zizinzima ngokwaneleyo ukuba zihluthe amathambo xa zihla emlenzeni wakho. Nangona kunjalo, amaninzi amanqabileyo ayenzi ngokukhawuleza ukuba angabi nengozi kwisiqalo esisikiweyo; uyibambelele, kwaye uya kuba ne-inshurensi encinci, ukwazi ukugcina ibhayisikili xa iwa.
Jabulela iSlip 'n Slide
Ungesabi ukuyilalisa ukuhamba kwakho! Ifoto © BMW
Xa sikhwela endleleni, siyazicwangcisa ukuqinisekisa ukuba sinokubamba ngokugqithiseleyo, kwaye ukuvakalelwa kwesithintelo somthamo kungabangela ukuphazamiseka okukhulu xa kuhlaselwa. Kwi-dirt, nangona kunjalo, ukulahla kuyindlela yokuphila. Umzila webhayisikili ngumgca okhulayo oguquka kwaye uguqula ngokuxhomekeke kwimimandla emininzi, kunye nabagadi bamathambo abanamava banokubangela iingxaki ezinzulu kunye nama-yaw angles ngaphandle kokucinga kabini.
Ukuzicwangcisa ngokwakho ukwesaba ukukhwabanisa kunokuba yinkqubo engumngeni, kodwa indlela yodwa yokujwayela ukungcola kwindawo yokungcola yenzeni kwaye yenza uxolo kunye nokulahlekelwa yintlupheko yinxalenye yolonwabo. Mfundisi lo, kwaye uya kuthatha enye yeyona mingeni enkulu kwi-rideroad riding.
... O, Nenye enye into: Uya kuwa!
Musa ukwesaba ukuwa kwe-dirtbike-konke kungenakupheka. Ifoto © I-Getty Izithombe yeMidlalo
Siyabulela ubuninzi bekhonkrithi, iinqumle, iimoto kunye nazo zonke iinkqubo ezixinayo ezixinzelelekileyo, ukuphazamiseka ezindleleni zikawonkewonke kungaba yinto embi. Ukungcola, ngakolunye uhlangothi, alulimazi phantse. Nangona ugqoke imoto yokhuseleko ibaluleke kakhulu ekuhambeni komgwaqo njengoko kusemgwaqweni, izingozi ezinxulumene nokuphazamiseka zincinci kumdaka. Kulula nje, nje ngelahleko yokulahlekelwa kunye nokukhwela izithintelo, ukuwa kuyingxenye eyamkelweyo yokukhwela i-dirtbike, kwaye enye yezinto ezingenakukwazi ukuzenza.
Ngoko gxuma, phuma kwipaki ye-motocross okanye umzila, kwaye ujabule; uya kufumanisa ukuba akusiyo kuphela ukuqhuma ukukhwela kwinqanaba, ubuchule obusakhulayo apho buya kuphucula izakhono zakho zesitalato.
Kwaye ekubeni kuninzi kakhulu ongazifunda wena ngokwakho, sincoma isikolo se-Motorcycle Safety Foundation, apho ungafunda khona izakhono ezivela kwi-pros.
Ukubaluleka kobukhulu beSithuthuthu
IAdinited International University Admissions
Ukunyuka kweMnyama Mesa: I-Oklahoma High Point
Iinqwelo zeSiqhwa: Ikhefu elongezelelweyo lamavili okanye iRount Remount?
Iingqwalasela zerhafu zoBugcisa bobuGcisa nabaSebenzi
Iinkcukacha zokunika abaBhali beeNkcazo zeNcomo
Ukwahlukana phakathi kwamazwi amabini aseFrentshi athi "amatsha"